koswan: April 2008
မနေ့က ကျွန်တော် နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရေစကြိုက သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ထမင်းအတူတူ
စားဖြစ်ကြတယ်။ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် အဲလို နယ်သား ၃ကောင် အတူတူစုပြီး စားပြီဆိုလို့
ကတော့ ထမင်းစားပြီးလည်း မထတော့ဘူး။ စကားတွေ ဆက်ပြောနေတတ်ကြတာဗျ။
အဲလိုဆိုတော့ ဇွန်းနဲ့စားရင် ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့။ ဒီတိုင်း လက်နဲ့စားလို့ကတော့ လက်က
ကျွန်တော်-လုပ်ချင်တာထက် လုပ်သင့်တာတွေကြီး ဦးစားမပေးတတ်သူ။ လုပ်သင့်တာကို
လုပ်သလို၊လုပ်ချင်တာကိုလည်း လုပ်တတ်သူ။လုပ်သင့်တာတွေချည်းလုပ်ပြီး ရလာမယ့်
အကျိုးထက် လုပ်ချင်တာ မလုပ်လိုက်ရလို့ခံစားရမယ့် ခံစားချက် မတန်ဘူးထင်ရင် လုပ်
ချင်တာလုပ်ပြစ်လိုက်ပြီး ရလာမယ့်၊ဖြစ်လာမယ့်အရာကို ငါလုပ်ချင်တာလုပ်လိုက်ရတယ်
နယ်သား ( ၁ )-လုပ်ချင်တာထက် လုပ်သင့်တာကို ဦးစားပေးပြီး...ကိုယ့်ကိုကိုယ် အချိန်နဲ့
အမျှ ထိန်းချုပ်နေတတ်သူ။စည်းကမ်းတွေ၊ဇယားတွေနဲ့ မိမိကိုယ်ကို self control လုပ်နိုင်
နယ်သား ( ၂ )-ဘဝကို ပျော်ပျော်နေမယ်။ အပူအပင်မရှိ၊ ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာမီးစင်ကြည့်
့်ကတတ်သူ။ ဖြစ်ချင်တာတွေချည်း လုပ်ပြီး ဖြစ်လာတာကို ပျော်ပျော်ကြီး လက်ခံတတ်သူ။
ဒါဆို...ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ စကားဝိုင်းလေးကို စလို့ရပြီပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ထဲမှာ ဟုတ်တာတွေ ပါသလို ၊မဟုတ်တာတေလည်း ပါတယ်။ အဲလို
ပြောကြရင်းနဲ့ ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုစကားဆက်စပ်သွားတယ် မသိပါဘူး။ မြန်မာကို ပြန်
ရင် ( issue ) ကျွေးမယ့်ထမင်းကို ပဲ စားမယ်ဆိုပြီး နယ်သား ( ၁ ) ကပြောပါလေရော။
ကျွန်တော်နဲ့ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့နဲ့သိတဲ့ ထမင်းဆိုင်
လေးမှာ လခပေးစားမယ်ပေါ့။ အခုဆို ထမင်းနှစ်နပ်ကို ၃၀၀၀၀ လောက်တော့ ပေးရမယ်
နော်ဆိုပြီး စိတ်ကူးဖဲတွေ ရိုက်နေကြတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့အတူ ထမင်းကို အပြင်မှာ စားမယ်ဆိုတဲ့နယ်သား(၂)က..."သေရင်.ကိုယ့်
တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း သူ့လိုမဟုတ်တောင် သူ့လောက်နီးနီးလက်ခံထားတော့ ထောက်ခံ
ပေးလိုက်တာပေါ့။ "ဟုတ်တယ်..ဘဝမှာ လုပ်သင့်တာတွေချည်းလုပ်ပြီးတော့ ရလာမယ့်
အကျိုးထက် ..ကိုယ်လုပ်ချင်တာ မလုပ်ရလို့ ခံစားရမယ့်ခံစားချက်မတန်ဘူးထင်လို့ က
တော့ ငါကတော့ လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး ဖြစ်လာမဲ့အရာကို ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံလိုက်
မယ်ကွာ. အဲတော့ စားမယ်"ဆိုပြီး ပြောတော့ နယ်သား ( ၂ ) ကလည်း"Right ..right ..
သဲလေးright ..သဲလေးright"ဆိုပြီး အားပေးတယ်။
နယ်သား( ၁ ) _"ငါကတော့ မစားဘူး။ကျွေးတာပဲစားမယ်။မင်းတို့ ပြောသလိုဆို မင်းတို့
မှာ self control ဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့။လုပ်ချင်တာတွေချည်းလုပ်နေရမယ်ဆိုရင်လည်း
self control ဆိုတာလည်းဒီအသက်..ဒီအခြေနေ ရောက်လာတဲ့ လူတိုင်းမှာ ရှိကြတာပဲ
ပေါ့ .. အနည်းအများပဲ ကွာတာပါ။မင်းပြောတာဟုတ်ပါတယ်။မင်းက မင်းကိုမင်းထိန်းချုပ်
နိုင်တယ်။ မောင်ရှင် ( နယ်သား ၂ ) နဲ့ ငါကတော့ မင်းလိုမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲတော့.၃၀၀၀၀
နဲ့ လုပ်ချင်တာမလုပ်ရလို့ စိတ်ညစ်နေရမှာနဲ့ စာရင် အဲဒီပိုက်ဆံ အကုန်ခံပြီး လဲမယ်ကွာ။"
နယ်သား ( ၂ ) _"Right ..right ..သဲလေး right ...သဲလေး right"
နယ်သား ( ၁ )_"အေးပါ အခုသာ ၃၀၀၀၀လို့ပြောတာပါ။ ပြန်ရောက်တော့ မင်းတို့ကအဲဒီ
တစ်ခုတည်းပဲ သုံးမှာလား???တခြားဟာတွေ မသုံးတော့ဘူးလား??? ရှေ့ရေးဆိုတာ ရှိ
နယ်သား ( ၂ ) _"မသိဘူး..ငါကတော့စားမှာပဲ။ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်.ပြီးမှ မီးစင်ကြည့်ကမယ်။
သေရင် ကိုယ့်နောက်တစ်ခုမှ ပါတာ မဟုတ်ဘူး။"
ကျွန်တော်_"မောင်ရှင်ပြောတာလည်း ဟုတ်တယ်။ ကိုစိုးဌေးရာ(နယ်သား၁)မင်းကလည်း
ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် မသဒ္ဓါဘူးလား???မင်းပြောသလို ၃၀၀၀၀ဆိုတာအခုအနေအထား
နဲ့ဆို စားနိုင်တယ်လို့ပြောတာလေ..ဒါပေမဲ့ ငါတို့ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီ ၃၀၀၀၀က ငါ့
နဲ့ အချိန်အခါအရပေါ့။ ငါ့ ညီတွေ၊ညီမတွေ အတွက် အဲဒီ၃၀၀၀၀ကို ထမင်းမစားပဲကျူရှင်
ထားရမယ်ဆို ငါဘယ်စားမလဲ။ရှုပ်ပါတယ်ကွာ..အခုလောလောဆယ် စားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်
နယ်သား ( ၂ ) _"သဲလေး right ...ချိုကြီး right"
"ဘာတွေ တွေးပူနေတာလဲကွာ။ အချိန်တန်တော့ သူ့ဘာသာ အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့။
ငါကတော့ မပူဘူး။ ဖြစ်လာမှပဲလုပ်မယ်။ဘဝလည်း မလုပ်လို့ မဖြစ်တော့ဘူးဆို ကြိုးစား
နယ်သား ( ၁ )_"အဲလို မပြောနဲ့ မောင်ရှင်၊ မင်းဟာက ကံကို ပုံချလွန်းတယ်။ ကံဆိုတာ
လူက လုပ်တာပါကွာ။ မလုပ်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှလုပ်မယ်ဆို မင်းတို့ကအားပုန်းတွေကို
အသုံးမချတော့ပဲ နောက်ဆုံးမှ သုံးတော့မှာလား??? "
ကျွန်တော်_"ဘယ်လို.ဘယ်လို ကိုစိုးဌေး???ဘာလဲဟ အားပုန်း??? "
အဲလို မေးလိုက်တော့ နယ်သား ( ၁ ) လည်းသူဖတ်ထားတဲ့စာတိုပေစလေးတွေကိုပြောပြ
လို့ရပြီ။ မသိရင်မှတ်ထားဆိုတဲ့အထာနဲ့ ...
"ဒီလိုကွ...ဟိုးအရင်တုန်းက အိန္ဒိယက ရွာလေးတစ်ရွာအနီးမှာ..သောင်းကျန်းသူ၊ သူပုန်
တွေဆိုးသွမ်းနေတယ်တဲ့။ သူတို့က ရွာရဲ့ အပြင်မှာရှိတဲ့ တောအုပ်ထဲမှာနေကြတော့
ရွာသူ/သားတွေလည်း တောထဲကို ထင်းခွေမသွားရဲကြဘူးပေါ့ကွာ။တစ်နေ့တော့ ရွာသား
တစ်ယောက်က အရဲစွန့်ပြီး အဲဒီတောထဲကိုထင်းခွေသွားတယ်။ အဲဒီမှာ သောင်းကျန်းသူ
တွေက သူ့ကိုဖမ်းမိသွားတယ်။အစကတော့ သူ့ကို ဒီတိုင်း သတ်ပစ်မယ်ပေါ့ ။ နောက်ကျမှ
၊သူ့ကို ဘယ်သူမှ မှီအောင် မပြေးနိုင်ဘူး။ သူကပြောတယ်.ထင်းခွေသမားကို ချန့်စ်ပေးတဲ့
အနေနဲ့ပြေးခိုင်းတယ်။တကယ်လို့ ရွာစည်းရိုးရောက်အောင်ပြေးနိုင်မယ်ဆို လွှတ်ပေးမယ်
တဲ့။မရောက်ခင် လမ်းမှာတင် မှီတယ်ဆိုရင်တော့ အသတ်ခံရမယ်ဆိုပြီး ထင်းခွေသမားကို
အရင်ပြေးခိုင်းပြီး သူကနောက်ကလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ အံ့အားသင့်လောက်အောင် အရမ်း
အပြေးမြန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သောင်းကျန်းသူမမှီအောင်ကိုပဲ ထင်းခွေသမားက ပြေးနိုင်ပြီး
လွတ်သွားတော့ ကျန်တဲ့သောင်းကျန်းသူတွေက အပြေးမြန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူကိုဝိုင်းပြီး
အသက်နဲ့ ရင်းပြီး ပြေးရတာဆိုတော့ သူ့မှာရှိတဲ့အားပုန်းတွေ ထွက်လာပြီးလွတ်သွားတာ
ကျွန်တော်နဲ့ နယ်သား( ၂ ) တို့တွေငိုင်သွားတယ်။ နယ်သား ( ၁ ) က ဆက်ပြောတယ်။
"အဲလိုပဲ မင်းတို့လည်း အသက်အန္တရာယ်ကြုံမှ၊ နောက်ဆုံးအချိန်ကျမှ မင်းတို့ရဲ့အားပုန်း
လည်း ဘဝမှာ ထိပ်ဆုံးမှာသာ မရှိခဲ့ပေမဲ့အလယ်အလတ်တော့မကခဲ့ပါဘူး။ကိုယ့်ကိုကိုယ်
ဥာဏ်ကောင်းတယ်။ မလုပ်ချင်လို့ပါကွာ။ ငါလုပ်ရင်ခဏပါပဲ။ကံကောင်းခြင်းအနေနဲ့လည်း
ဥာဏ်ကောင်းသေးတယ်။ ပိုပြီးတော်သေးတယ် ။ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသွားတဲ့နယ်သား
(၁) ကတော့ အရမ်းကြီးဥာဏ်မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ သူ့မှာ ကြိုးစားအားထုတ်မှု လုံ့လ
ဝိရိယ က ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်အောင် ကွာခြားတယ်။ ဘယ်သူမဆို
ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ ကိုယ်ဘာကောင်လဲဆိုတာသိကြပါတယ်။ အဲလိုသိလို့လည်း ဥာဏ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေပိုဆိုးသေးတယ်။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုအေးအေး
ဆေးဆေးနေချင်ကြတယ်။မဇ္ဖိမပရိပတာဆိုတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဆိုစကားအတိုင်းလည်း ဘယ်
မိမိတို့မှာရှိတဲ့ ကာယအား၊ဥာဏအားတွေကို အကုန်ထုတ်မသုံးကြဘူး။ နည်းနည်းလေး
အားစိုက်လိုက်လို့မှ အဆင်မပြေဘူးဆိုကံမကောင်းဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့
အရှုံးပေးတတ်ကြသေးတယ်။ ပြီးတော့.တကယ်ကြိုးစားပြီးအောင်မြင်နေတဲ့ သူတွေကို
လည်း သူတို့ ဘာကြောင့်အခုလို အောင်မြင်နေတာလည်းဆိုတဲ့ မေးခွန်းထက်ချမ်းသာမှာ
ပေါ့ သူတို့က ဘယ်လိုကို၊ဘယ်ညာကိုဆိုပြီးပဲ မကောင်းတဲ့ အတွေးတွေကို ရှေ့တန်းတင်
တတ်ကြတယ်။ အားပုန်းတွေကို ထုတ်သုံးကြဖို့ နေနေသာစိုက်ထုတ်နေရတဲ့ အားတွေကို
ုတောင် ဘယ်လိုသက်သာအောင် လုပ်ရမလဲဆိုပြီးသာတွေးနေတတ်ကြတော့ မခက်ပေ
ဘူးလား။ တစ်ချိန်ကအမေရိကန်လုပ်ငန်းစုံသူဌေးကြီးဟင်နရီကိုင်ဇာပြောဘူးတဲ့ စကား
လေးတစ်ခွန်းကလည်း အားပုန်းတွေကို ထုတ်သုံးဖို့ပြောတဲ့ စကားလေးပါ။
"လူအများစုတို့သည် မိမိတို့မှာရှိသည့် တီထွင်ကြံဆမှုစွမ်းရည်နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းရည်
တို့၏ ဆယ်ပုံ တစ်ပုံ မျှလောက်ကိုသာ အသုံးပြုနေကြသည်။အကယ်၍ မိမိစွမ်းအား ရှိသ
မျှသာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ အသုံးချမည်ဆိုပါက မိမိ၏ စွမ်းဆောင်အောင်မြင်မှုများအတွက် မိမိ
ကိုယ်တိုင်ပင် အံ့အားသင့်ရလိမ့်မည် " လို့ ပြောခဲ့ဘူးတယ်။
ဟုတ်လည်းဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးနီးပါးကိုယ့်မှာရှိတဲ့အားပုန်းတွေကိုဘာဖြစ်လို့
တစ်ချို့က သိတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ မသိကြဘူး။ သိတဲ့လူကလည်း အသိကိုအသိအတုိင်း
ထားပြီး လက်တွေ့ မသုံးသလို ၊ မသိတဲ့ သူတွေကလည်း သိအောင်မကြိုးစားကြဘူးလေ။
အဲတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြီး...မေးကြည့်ပါဦး။
တစ်ကယ်ပဲ ဖြစ်လာမှ မီးစင်ကြည့်ကမှာလား???
အလယ်အလတ်ဆိုတဲ့ ဘဝမှာပဲ ကျေနပ်နိုင်ပြီး ၊ နေသွားနိုင်ပြီလား???
Posted in စကားဝိုင်း by ကိုစွမ်း
Posted in ဓာတ်ပုံ by ကိုစွမ်း
ကျွန်တော်တို့ကို အမေ လှအောင်
ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ အမေ အမြဲတမ်း နေပေးခဲ့တယ်။
အမေ့ရဲ့ ပုံပြင်လေးတွေထဲမှာ အိပ်စက်ခွင့်တွေ
အမေ့မှာ ပညာဗလာ ၊ ဥစ္စာနတ္ထိ
အမေ့အတွက် ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ ပထမဆုံး ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ ။ ကာရန်တွေ၊နပေတွေ ကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူး။ ရေးချင်တာနဲ့ လျှောက်ရေးလိုက်တာပါ။ မကောင်းဘူးဆိုရင် အမေ့ အကြောင်းလေးတွေကို ပေါ်လွင်အောင် မသီကုံးတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်မှာပဲ အပြစ်ရှိပါတယ်။ အားလုံးပဲ ဝေဖန် အကြံပေးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
အခု ဗွီဒီယိုလေးကိုmetacfe ကနေ ယူထားတာပါ။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ပုံတစ်ခုချင်းစီကို ရပ်၊ရပ်ပြီးကြည့်ပါ။ဘာတွေပါသလဲလို့။သဘောကျမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted in ဗွီဒီယို by ကိုစွမ်း
မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်းလေးထဲမှာ မြန်မာသံ စစ်စစ် Ring Tone လေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဟောဒီက
လင့်လေးတွေမှာ ဒေါင်းလုပ်ချပြီးယူလိုက်ပါ ။
အဲဒါမှ မကျေနပ်သေးဘူး၊ အင်္ဂလိပ် သံစဉ်လေးတွေကိုပဲ ထည့်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ဟော... ဒီမှာ စိတ်တိုင်းကျ သွားရှာပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။
အခုမှ ကျွန်တော်တို့လို ဘလော့စလုပ်တဲ့ သူတွေအတွက် ၊ ဘလော့လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်... အခုတင်ပေးထားတဲ့ ဘလော့တစ်ခုကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ (ကိုစေတန်ဂေါ ) ရဲ့  ဖိုင်လေးက အရမ်းအသုံးဝင်မှာပါ ။
ဒီမှာ ယူပြီးတော့ လေ့လာနိုင်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဘလော့ helpdesk ကိုလည်း ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင် လန်ထွက်နေတဲ့ ဘလော့လေးတစ်ခုတော့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ ။အားလုံး ဘလော့လေးတွေလုပ်ပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ ။
Posted in ဘလော့ဆိုင်ရာ by ကိုစွမ်း
There isaold tree that dying,and then rain came sunddenly so it grew leaves.Then autumn came and wind blew the leaves away.
There are5chracters, you must choose 1 only , It is rain,tree,leaves,wind and autumn.
wind = You are now with safe person,who will really love and care for you.
Tree = You are very loyal to your partner and if you break up it won't be easy for you to forget.
Leaves = You areaplayboy / playgirl.
Rain = You are 3rd person inalove triangle.
Autumn = You can love 2person at the same time.
၁ ။ သင်ဟာ မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုမှာ ယောင်ပြီး passwardရိုက်ထည့်မိနေမယ်။
၂ ။ ဖဲကို တကယ့်ဖဲချပ်နဲ့မဆော့တာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာသွားပြီ။
၃ ။ မိသားစု သုံးယောက်ကို ဆက်သွယ်ဖို့ ဖုန်းနံပတ်၁၅ခုရှိနေမယ်။
၄ ။ ခုံချင်းကပ်ရက် အလုပ်လုပ်တဲ့သူကို ပြောစရာရှိရင် အီးမေးလ်ပို့တယ်။
၅ ။ သူငယ်ချင်းတစ်ချို့  အမျိုးတစ်ချို့ နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားရခြင်းက သူတို့မှာအီးမေးလ်
၆ ။ ကားကို ဂိုဒေါင်ထဲထိုးရပ်ပြီး အိမ်ကလူတွေကို ဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေ လာကူသယ်ပေးဖို့
၇ ။တီဗီမှာ လာသမျှကြော်ငြာတွေအောက်မှာ ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာတွေပါနေတယ်။
၈ ။သင့်ဘဝရဲ့  ပထမ ၁၀နှစ် (သို့ ) ၂၀နှစ်လောက်မှာ သင်နဲ့အတူတူမရှိခဲ့တဲ့ hand phone
အိမ်ကအထွက်မှာ ပါမလာတာနဲ့ သင်ဟာ ထိတ်လန့သွားပြီး နောက်ပြန်လှည့်ပြီး
၁၀ ။ အိပ်ရာက နိုးလာတာနဲ့ ကော်ဖီမသောက်ခင် အင်တာနက်ပေါ်တက်တယ်။
၁၁ ။ တဖက်လှည့်ပြီးစပြုံးတော့မယ်။
၁၂ ။ ဒါကိုဖတ်ပြီး ခေါင်းငြိမ့်ပြီး ပြုံးနေပြီ။
၁၃ ။ ပိုဆိုးတာက သင် ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကို ဘယ်သူ့ဆီ လုပ်မလဲလို့စဉ်းစားနေပြီ။
၁၄ ။ အလုပ်များလွန်းလို့ ဒီစာမှာ နံပတ် ၉ မပါတာတောင် မသိလိုက်ဘူး။
၁၅ ။ အမယ်... နံပတ်၉ တကယ်မပါဘူးလားဆိုပြီး အပေါ်ကစာကြောင်းကို ပြန်ဖတ်နေတယ်။
ပြောပါတယ် ။ 2008ရောက်နေတယ်လို့ ။
အခု မက်ဆေ့ခ်ျလေးကို မနေ့တစ်နေ့ကမှ ကျွန်တော်ဆီ forward messageနဲ့ရောက်လာလို့ ဖတ်ကြည့်မိရင်း သဘောကျသွားလို့ တင်လိုက်တာပါ ။ သူပြောမယ်ဆိုလည်း ပြောစရာပဲ နံပတ်၉ ကျန်ခဲ့တာကိုတောင် မသိလိုက်ဘူး :) ။
ငါ့ဘဝရဲ့  နတ်သမီး...
မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်ရရိုး အမှန်ပါ...
နေညိုညို ဘဝတွေ အိုတာတောင်
မပြောင်းမလဲ ကျန်ရစ်မယ့် အဖြစ်
မင်းရဲ့ အတောင်ပံတွေကို မရိုက်ချိုးရက်ခဲ့ပါဘူး...
မင်းကို ချစ်တယ် ကောင်မလေးရယ်...။
ရင့်လို့ပဲဝါဝါ ညှာတံပဲ ခြောက်ခြောက်
နှလုံးသားတောင်ထိပ်က အလွမ်းမိုးရိပ်တွေပါ ညို ။ ။
(ငါ့) ချစ်သူသာဖြစ်ပါ၏။ ။
( ၁ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။ အလကားနေရင်း အကြည့်ချင်းဆုံ၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ အကြည့်ချင်းဆုံနေလျှင်လည်း အလကားဖြစ်၏ ။
( ၂ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။ အလကားနေရင်း ချစ်သူကို တမ်းတ၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ ချစ်သူကိုတမ်းတသော်လည်း အလကားဖြစ်၏ ။
( ၃ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။ ကလေး ဘယ်နှယောက် ယူလိုက်မည်ဟု စိတ်ကူး၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ စိတ်ကူးသည့်အတိုင်း ကလေးမယူဖြစ်ခဲ့ရင် အကောင်းသားဟု တွေး၏ ။
( ၄ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သမျှ သူ့အားပေး၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သမျှ ဘဏ်တွင် တိတ်တိတ်လေး ထားလို၏ ။
( ၅ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။ မွှန်နေသော်လည်း ကိစ္စမရှိဟု ဆို၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ ကိစ္စရှိမှ မွှန်၏ ။
( ၆ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ဖုန်းပြောပါက တိုးတိုးလေးပြော၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ ဖုန်းထဲမှ အော်ရသည်ကိုပင် အားမရ ။
( ၇ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။ ချစ်သူ့အကြောင်း ကဗျာရေးဖွဲ့၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ ကဗျာရေးသူ ငစနူ ။
( ၈ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။ သူငိုလျှင် ကိုယ်လိုက်ငို၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ သူငိုလျှင် TV အစီအစဉ်ကောင်းပြီ ။
( ၉ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။ သူ့မွေးနေ့ကို အလွတ်ရ၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ ကိုယ့်မွေးနေ့ကိုပင် အလွတ်မရ ။
( ၁၀ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။ လူတောထဲတွင် လက်ချင်းချိတ်၍ သွားလေ့ရှိ၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ လူတောထဲတွင် မျက်စောင်းချင်းချိတ်၍ သွားလေ့ရှိ၏ ။
( ၁၁ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။ အစာစားလျှင် ခွံကျွေးမှ ကြိုက်၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ အစာစားလျှင် ဇွန်းကိုင်လိုက်မှာ ကြောက်၏ ။
( ၁၂ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။ အချစ်သီချင်းများသာ နားထောင်၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ ကက်ဆက်အကြောင်းသာပြော၏ ။
( ၁၃ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။ ချစ်သူ အကြောင်းသာပြော၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ သံသရာမှ လွတ်မြောက်ရာအကြောင်းသာတွေး၏ ။
( ၁၄ ) ချစ်သူဘဝ ။ ။ ချစ်သူလုပ်သမျှ စိတ်ဝင်စား၏ ။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ။ ။ လူပေါင်းမှားခဲ့မိသည့်အတွက် ရင်ထုမနာ ဖြစ်၏ ။
ဃ..................ဃဂဏန သိပါရစေ ဆိုတော့
တစ်ခုတည်း ၊ နှလုံးသားနှစ်ခုဟာ
( ဂျွန် ကိစ် )
အချစ်ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ ဟာ
မိမိကိုယ်မိမိ ရှာဖွေတွေ့ ရှိလိုက်တာပါပဲ ။
( အလက်ဇန်ဒါး စမစ် )
( စိန့်  သြဂတ်စတင်း )
her was to
ove but her,
သူမကို ချစ်ရဖို့ ပါ ။
ချစ်သွားဖို့ ပါ ။
( ရောဘတ် ဘန်းစ် )
without love is
( ဆွီဒင် စကားပုံ )
လှပတဲ့ အိပ်မက်တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပါ ။
( ၀ီလျံ ရှပ် )
( ကာရင် ဆန်ဒီ )
ငါ ... မပစ်ခတ်ခဲ့ပါဘူး
လက်ထဲက လွတ်ထွက်သွားတာပါ ...
ငါ့ကို ... ယုံပါ ။
အိမ်ထဲကို မဖိတ်ချင်ကြဘူး )
ငါ ...တတ်တဲ့ မြေကြီးစကားနဲ့
ပြောမပြနိုင်ခဲ့ဘူးလေ ... ။